सम्पादकहरूको परीक्षणमा उत्तम लन घास काटने रोबोट। तपाईंको मार्गदर्शक
सुरु बगैचा बगैंचा उपकरण र उद्यान उपकरणहरू घास काटन मिसिन
1 घास काटन मिसिन
2 लन घास काटेर कसरी काम गर्दछ?
3 Lawnmower रोबोटको फाइदा
4 अनुप्रयोगको क्षेत्र
5 कस्ता प्रकारका लनहरू रोबोटहरू त्यहाँ छन्?
6 वर्तमान lawnmowers को सर्वश्रेष्ठ सूची
7 Accu र शक्ति
8 प्रयोगकर्ता मित्रता र गुणस्तर
9 घाइते नतिजा र आन्दोलन प्रणाली
10 काममा आवाज
11 लनमोवर रोबोट खरिद गर्दा तपाईंले ध्यान दिनुपर्छ
12 कतारमा रोबोट खरिद गर्ने: रिटेल वा अनलाइन?
12.1 खुदरा व्यापार को लाभ:
12.2 अनलाइन व्यापार को लाभ:
13 लन को प्रमुख निर्माता रोबोटहरु लाई मारने वाला
14 Lawnmower रोबोटहरूको बारेमा उपयोगी
15 रोबोट वा पेट्रोल लॉन घास काटने
16 Lawnmower रोबोट को रखरखाव
17 त्यसो कि लान सुन्दर हुन्छ ...
18 एक lawnmower रोबोट सार्थक कहिले हुन्छ?
19 घास काटने को तरीका कसरि ड्राइव गर्न को लागी छ र कहाँ नहीं?
20 वर्षामा के गर्नु हुन्छ?
21 घाँस काट्नको लागी कसरी यो थाहा पाउन सक्छ?
22 मलाई कसरी थाहा छ मेरो लॉनम्वर रोबोटलाई कसरी बलियो बनाउन आवश्यक छ?
23 म बगैचामा ढोका संग के गर्छु?
24 म सीमा केबल कसरी सारियो?
25 यस्तो उपकरणको भोल्युम के हो?
der घास काटन मिसिन लान को लागी लाखौं किसानहरु दश वर्षहरुका लागि चाहन्थे: एक लन घास काटेर बिना घिमिरे र धक्का बिना घाँस काटेर। निस्सन्देह, रोबोटलाई सबै कुरा बनाउनको लागि मानिसको डोऱ्याइ चाहिन्छ; तर पछि पछि उहाँले साजिश को राम्रो तरिकाले बनाए राखिएको राम्रो तरिकाले बनाउन को लागि एक सरल मद्दत हो। उहाँ आफ्नो ब्याट्रीको साथ चलाउनुभएको स्थान निरन्तर रूपमा चिन्हित भएको छ, घाँस छोडेर लामो समयसम्म कुनै मौका नदिने। फायदा यो तरिकाले छ: घाँस काटिएको छैन किनकी सानो उचाइहरू काटिएका छन्।
यसले कसरी काम गर्दछ घास काटन मिसिन?
घास काटने वाला पहिएहरु संग यो चाल गर्दछ, र तल्लो तेज चाकू मा, जसमा त्यो एक क्लासिक घास काटने को लागी लान को कट को उपयोग गर्दछ। तथापि, उहाँले कटौती - धेरै उच्च - घास वास्तवमा, एक परम्परागत घास काटेर बाबाले घाँस काटेर। विशेष विशेषता: यसले लान छोटो राख्छ, र घाँस बढेको हुन्छ र मर्दा मात्र खेल्दछ।
बिजुली आपूर्ति एक ब्याट्री द्वारा नियन्त्रित छ। यो सिद्धान्त अब क्लासिक लॉन मावरहरूका लागि उपलब्ध छ। मंगलबार रोबोट एक "बुद्धिमानी" हो जुन, उहाँ जान्नुहुन्छ जब उनको बल अन्त हुन्छ, र आफ्नो चार्ज स्टेशनमा फर्कन्छ, जहाँ उनी भर्खरै पर्खनु पर्दछ, र त्यसपछि आफ्नो काम जारी राख्छ।
यसका फाइदाहरू Rasenmähroboters
सबैभन्दा ठूलो फाइदा सुरक्षित काम गर्ने समय र शक्ति हुनुपर्छ। यो रोबोट घास काटन मिसिन पनि खपत समय लाग्न गर्दैन भने छैन गर्दा, तर यो यो पारंपरिक घास काटन मिसिन संग लन मा काम गर्न लागत समय तुलना कुनै तरिका छ। अर्को फाइदा कुनै घाँस कतरन आवश्यकता जसको अर्थ एक ठूलो षड्यन्त्र मा धेरै काम, को disposed गर्न भनेर खडा छ। साथै, विशेषज्ञहरु एक neater को, स्वस्थ लन यो लगातार रोबोट द्वारा छोटो राखिएको छ बोल्ने। समग्रमा, त्यसैले, एक यी लाभ को कुरा गर्न सक्नुहुन्छ:
अधिक स्वस्थ लन
राम्रो पर्यावरण अनुकूलता
धेरै प्रयोगकर्ताहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् घास काटन मिसिन तिनीहरूको लागि उपयुक्त हुनेछ। सिद्धान्तमा, सबैले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन्, जसको कारण सम्पत्ति मालिकहरूको निश्चित समूहको लागि अधिग्रहण निश्चित रूपमा सार्थक हुन्छ।
रोबोट विशेष गरी सहायकको लागि उपयोगी छ जो शारीरिक रूपमा सामना गर्न सक्षम छैन घास काटन मिसिन उनीहरूको सम्पत्तिमा। विशेष गरी पर्वतमा यो धेरै तनावपूर्ण हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै नियोक्ताहरूले बगैचाको लागि यस्तो सहायकको खरीद सुझावका लागि अस्थायी कारणहरू छन्। किनकि यो साजिश धेरै ठूलो छैन - हरेक हप्ता हरेक हप्ताको लागि क्यान्सर लागु गर्न को लागी लागू हुन्छ, र यो केहि वास्तविक समस्याको लागि हो। यद्यपि, "सड़ाएको छाला" झूट गर्न राम्रो कुरा हो, र मेशिनलाई लान घास काटेर हेर्नुहोस्।
पनि प्रभावित सबैहरू हुन् जो एलर्जीको पीडाले लानलाई मार्न गाह्रो छ। आँसु र निरंकुश आँसु पुछिनु अत्यन्त अप्रिय छ। यी समस्याहरू पनि लन रोबोटबाट बचाउन सकिन्छ।
कस्तो प्रकारको Rasenmährobotern त्यहाँ छ?
सिद्धान्तमा दुई प्रकारका छन् Rasenmährobotern:
एक प्रजाति टर्फ सेन्सर को माध्यम ले उन्मुख छ
एक सीमित तार संग अर्को
पछिको अवस्थामा, भू-भाग, जुन रोबोट यात्रा गर्ने उद्देश्य छ, सीमित तारसँग निश्चित हुनुपर्छ। यस तार भित्र घुमाउरो चलिरहन्छ। अर्कोतिर, सेन्सरले घाँस काटने वा गल्तीमा पत्ता लगाएको छ कि यो सुनिश्चित गर्दछ। यसको लागि, फलाम र बाडहरू बीच फूल वा फसलको बीचमा एक पूर्ण विभाजन गरिन्छ, किनकी उसले अन्यथा तिनीहरूलाई उनीहरुलाई लन र मोजा भनिन्छ।
अहिलेको सर्वोत्तम घास काटन मिसिन
अन्य यन्त्रहरूको रूपमा, निर्माताहरू लगातार नयाँ मोडेलहरू विकास गर्दैछन् जुन प्रयोग गर्न सजिलो र राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। यसैले, खरीद को लागी बस रोबोट रोबोट को "हिट सूची" संग निपटने को लागि यो काफी माहिर छ, किनकि यहाँ केहि नयाँ चीज यहाँ भेटिन्छ।
ग्राहक समीक्षा र निर्माता जानकारीको आधारमा, हामीले न्याय संकलन गरेका छौं र अब तपाईंलाई उपयोगी सुझाव दिन सक्दछौं।
हाम्रो साझेदार साइटमा, हामीले आफैले लोकप्रिय मोडेलहरू परीक्षण गरेका छौं र उपयुक्त भिडियोहरू पनि सिर्जना गर्यौँ। यहाँ तपाईंले ठूलो पाउनुहुनेछ लनमोवर रोबोट परीक्षण.
जबकि "सामान्य" बगैचा उपकरणहरुको लागि पर्याप्त छन्, जो 1.000 यूरो को बारे मा लागत, एक बैग मा गहरे ठूलो सम्पत्ति को लागि समझ पर्छ, पछि देखि एक उच्च प्रदर्शन उचित छ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि टुक्राको आकार लगाउन सकिने सम्भव छ जुन यो निर्माताले रोबोटलाई रोक्का गराएको छ। त्यसपछि मात्र उपकरणले यसको काम पूर्ण रूपमा उत्कृष्ट रूपमा गर्न सक्छ।
हामी यहाँ उनीहरूको सबैभन्दा राम्रो अनुशासनमा उत्कृष्ट मोडहरू प्रस्तुत गर्छौं:
Accu र शक्ति
ब्याट्री अपरेसनको अवस्थामा, धेरै यन्त्रहरूको पथ पहिले नै विच्छेद गरिएका छन्। तथापि, हामी 18 वाल्ट को लिथियम-आयन ब्याट्रीको साथ माइक्रोस्कोप कामको अन्तर्गत धेरै राम्रो यन्त्रहरू लिन्छौं। अपवादहरू, उदाहरणका लागि, वुल्फ रोब स्कूटर 500 र वाइकिङ iMow एम-322 सी, जुन लीड एसिड ब्याटरहरूसँग सुसज्जित छन्, जुन प्रत्येक 24 भोल्ट बलियो हुन्छ। लगभग 30 भोल्टको साथ लिथियम-आयन ब्याट्री एक प्रदान गर्दछ कन्फेन्सन गार्डन हीरो.
लान क्षेत्रमा, जो प्रभावित हुन सक्छ, फरक फरक छ। द्वारा र ठूला, एक यन्त्रहरू अन्तर्गत 500 वर्ग मीटरको बीचमा भिन्न हुन सक्छ, जुन 500 र 1.000 वर्ग मीटर र ती ठूला ठूला कानहरूका लागि उपयुक्त छन्।
समयमा घास काटन मिसिन यसको रिचार्जयोग्य ब्याट्री रिचार्ज गर्न आवश्यक छ। यस समयमा हस्पकुर्वर्न ओटोवर 430X मात्र 65 मिनेट ब्याट्री चार्ज गर्न उल्लेख 135-60 मिनेट समय चार्ज अन्य मोडेल हुन्छन् सोच्न 70 मिनेट घास काटन सक्छ, मा सबै भन्दा राम्रो, जस्तै लामो (एक घण्टा बारेमा) घास काटन गर्न आवश्यक र त्यसपछि, र त्यसपछि।
प्रयोगकर्ता मित्रता र गुणस्तर
एक साधारण सञ्चालन र उत्कृष्ट गुण संग हस्पकुवर्न ओटोवर 430 एक्स धेरै ठूलो उनको सानो भाइ पनि 320 दुवै कोटिहरूमा अंकहरू अंक गर्न सक्दछ। गार्डेन यसको अपरेसन निर्देशनहरूको लागि ठूलो प्लस रहेको छ, जुन साँच्चै अनुकरणीय हुन्छ। सेटिङ्हरू जुन सीधा छन् घास काटन मिसिन धेरै राम्रो हुन सक्छ।
बोस्कबाट लन रोबोट नाम इङ्गो नामको राम्रो गुण र सजिलो स्थापना र कार्यक्रमको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। उत्तराधिकारी Indego Connect मोबाइल टर्मिनलहरू जस्तै स्मार्टफोनको साथ सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
वुल्फबाट भेडा छ रोब स्कूटर 500, फेरि, अपरेसन सजिलो छ।
घाइते नतिजा र आन्दोलन प्रणाली
हज्ज्वर्न स्वर्गीय स्कोर स्वत: आन्तरिक ढाँचामा। लान यसैले इष्टतम चित्र प्राप्त गर्न सक्छ। काटने ढाँचा उत्कृष्टको रूपमा वर्णन गरिएको छ। काटिएको डिस्कमा तीनवटा चक्कुहरू घुमाउनुहोस् र रङ ब्लेडको रूपमा काट्नुहोस्। आदान प्रदानको आदान प्रदान प्रत्येक दुई देखि तीन महिना राम्रो परिणामको लागि बदलिनु पर्छ।
गार्डेनाले आफ्नो रोबोटहरूलाई स्वतन्त्र आन्दोलन ढाँचाको लागि काम गर्न पनि दिन्छ। अनियमित काम पथहरू सुनिश्चित गर्दछन् कि घाँस काटेर सबै ठाउँमा अन्त्य भएको छ र लान सुन्दर रूपमा पनि छ।
बोस सटीक र सही काटने को सिद्ध को लागि प्रतिबद्ध छ। इष्टतम मछाडि ट्रयाक एकाइ द्वारा गणना गरिएको छ। यहाँ काटिएको रणनीति अघिल्लो व्यक्ति भन्दा फरक छ: समानांतर मार्गहरूले काम गर्ने सतह बिना छोडेका क्षेत्रहरू प्रदान गर्दछ।
यी सबै यन्त्रहरूमा एक कटाईको उचाई समायोजन छ, त्यसैले तपाईं निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ कि घाँसको कत्तिको बढी रहनु पर्छ। केही मोडेलहरूमा7सँग 10-शैली समायोजन, जस्तै बोस्शबाट इन्डेगो।
ढोका रोबोटले फाइदा उठाउँछन् कि उनीहरूले आइतबार र उनीहरूको कामको छुट्टिहरू पनि काम गर्न सक्दछन्, जुन साधारण लन घास काटिएको छ। किनभने रोबोटको कम शक्तिले यो पनि धेरै पटक शान्त हो भनेर सुनिश्चित गर्दछ। यद्यपि, फरक फरक छन्।
हस्पकुर्वन मोडेलहरू विशेष गरी शाङ्घाई 60 डीबी अन्तर्गत छ, जबकि वुल्फ द्वारा यन्त्र 77 डीबी भन्दा माथि छ। बोस्चले सतहमा एक मात्राको 75 डीबी ल्याउँछ। सबै घास काटन मिसिन तथापि तपाईंको सामान्य लन घास काटेर टाढा हो र त्यसैले कुनै पनि श्वसन प्रदूषण नगर्नु।
यसमा तपाईंले एक खरीद गर्नुपर्छ Rasenmähroboters ध्यान
यदि निर्णय गरिएको छ कि यस्तो रोबोट खरिद गरिएको छ र सायद पनि एक वा अन्य मोडेलले छोटो सूचीमा प्रवेश गरेको छ, निम्न मापदण्ड राम्रो तरिकाले जाँच गरिनुपर्छ।
त्यहाँ एकै ओर ब्याट्रिको प्रविधि प्रविधि हुनेछ। आज यो प्रायः लिथियम-आयन ब्याटरहरू हो, जुन स्थापना गरिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि तिनीहरू कार्गोको गतिको आधारमा बेवास्ता छन्, र तिनीहरूको तुलनामा कम वजन पनि हुन्छ।
यदि तपाईंलाई प्रतीत हुन्छ कि तपाईले इलेक्ट्रनिक रूपमा काम गर्न सक्नु हुन्छ र हातले होइन भने, यो तपाईंको लागि उपयोगी हुन सक्छ - सम्भवतः फरक बगैचा क्षेत्रहरूको कारण - काट्ने उचाई प्राय: समायोजन गर्न।
यदि आवश्यक छ कि धेरै किनारहरू काटिएका छन्, यो एक खरीदको लायक छ Rasenmähroboters यसका साथ बुझाएको किनारा मर्यो प्रकार्य।
सामान्य अवस्थामा, रोमिङ रोबोटले सीमित केबल चाहिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति जो आफ्नो बगैचा को रोबोट द्वारा चकना चाहते हो, पहिला राम्रो तरिकाले विचार गर्नु पर्छ कि उसलाई केबल राख्नु पर्छ र यस बारे मा यस बारे मा बगैचा को डिजाइन मा सुधार गर्न सकिन्छ। पेडहरू र अन्य ठूला वस्तुहरू - तर एक सीमित तारलाई फूलको छेउमा राखिएको छ। अधिक महंगे संस्करणहरू सेन्सर पत्ता लगाउने रोबोटहरू मर्छन्। तथापि, यहाँ आवश्यक छ कि बिडहरू र सहहरू फरक विभाजनहरू छन्, किनकी अन्यथा घाँस काटेर मात्र लान र फूलहरू बीचको संक्रमणमा पार हुन्छ।
यदि त्यहाँ सम्पत्तिमा ढलान छ भने यो यो प्रतिशतको रूपमा अनुमानित हुनुपर्छ। प्रायजसो रोबोटहरूले 35% वरपर उत्पादन गर्दछ। तर त्यहाँ विशेष उपकरणहरू छन् जसले स्टीपर ढलानहरू पनि सिर्जना गर्छ। तर तपाई तिनीहरूलाई खोज्नु पर्छ।
धेरै महत्त्वपूर्ण: बगैचा आकार। यहाँ, घास काट्न सकेसम्म यथार्थ हुनुपर्छ, जुन घास काटने को सतहले सामना गर्न र यसको लागि डिजाइन गरिएको छ। वर्ग मीटरलाई यन्त्रमा संकेत गरिएको छ जुन यसको डिजाइन गरिएको थियो।
अन्तिम तर कम्तिमा: भोल्युम। यहाँ, घास काटने वाला 75 डीबी भन्दा ठूलो हुनु हुँदैन, जो लगभग पारंपरिक वैक्यूम क्लीनर संग मेल खाता छ। के के छ भनिरहेको छ बिगबिगी हुन सक्छ। तर यो कोर्समा निर्भर गर्दछ कि घाँसको टुक्रा संभवतः घरबाट अगाडी बढ्छ।
कहाँ किन्न घास काटन मिसिन सर्वश्रेष्ठ: रिटेल वा अनलाइन?
निस्सन्देह, दुवैको यसको फाइदा र हानि छ। समस्या यो हो कि तपाईंले रिटेलरको सल्लाह निशुल्क निःशुल्क पाउनुभयो। दुर्भाग्यवश, यो विशेषज्ञता प्राय: सीमित छ, विशेष गरी निर्माण र बगैंचा बजारमा। तथापि, तपाईं वास्तविक व्यापारमा भाग्यशाली हुन सक्नुहुनेछ र एक सहयोगीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ जुन साँच्चिकै थाहा छ उसले के कुरा गर्दैछ। अनुभवको अनुसार, सामान्य भन्दा बढी मोडेल र निर्माताहरू छन्। खुदरा व्यापारको ठूलो फाइदा, तथापि, कि एक ग्राहकको घर जान्छ, सम्पत्ति निरीक्षण गर्दछ र त्यसपछि प्रस्ताव प्रदान गर्दछ, वा पनि कमीशन र तार को बिछाउने प्रदान गर्दछ।
खुदरा व्यापार को लाभ:
व्यावसायिक योग्य जानकारी
आफ्नो सम्पत्तिमा चयनको छनौट सम्भावना सम्भव छ
डेलिभर द्वारा साइट मा डिलिवरी र तार को बिछाने
अनलाइन व्यापारको लागि, यो भने छ कि त्यहाँ एक ठूलो प्रस्ताव छ र मूल्यहरू सामान्यतया तल्लो तहमा छन्। यद्यपि, तपाइँ कसैलाई आशा गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईंको बगैचाको लागि उत्तम यन्त्र हो वा स्थापनाको साथ मद्दत के हो। ईन्टरनेट मार्फत खरिद एक प्रश्न हो, यदि तपाईलाई वास्तवमा कुन मोडेल चाहानुहुन्छ, र तपाइँ यसलाई एक्लै स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
अनलाइन व्यापार को लाभ:
धेरै छिटो वितरण
प्रमुख निर्माताहरू Rasenmährobotern
Bigmow भन्दा बरु निजी प्रयोगको लागि - सबैभन्दा शक्तिशाली घास काटन मिसिन संसार। यो धेरै राम्रो हो, तर 20.000 वर्ग मीटर वरिपरिका लागि डिजाइन गरिएको।
वाइकिंग, प्रारम्भिक 80 वर्षमा स्थापना गरिएको, बागवानी उपकरणमा माहिर छ र रोबोटहरु लाई पनि बिक्री गर्दछ। यो प्रायः भेट्न पहिलो स्थानहरू बीचको दर्जामा छन्।
प्रसिद्ध ज्ञात कम्पनी बोस्चले रोबोटहरू पनि प्रदान गर्दछ। यो कक्षाको उत्कृष्ट बनिष्ठहरू हुन् र निजी क्षेत्रमा पनि खरीद गरिन्छ।
दुई मुख्य प्रतियोगिहरु गार्डेना र हस्पकुर्वन हुन्। जबकि गार्डेना बगैचा उपकरण संग मैनुअल क्षेत्र मा जानिन्छ, हस्पर्वार्न विशेष रूप देखि उत्कृष्ट chainsaws संग लोकप्रिय छ। दुवै संधै अगाडि स्थानहरूमा तुलनामा छन् र तिनीहरूका सिफारिस गरिएका मिसिनहरू पनि छन्। हस्पकुर्वर्नले लामो समयसम्म जीवन र राम्रो गुणस्तर ल्याएको छ तर उच्च मूल्य पनि।
यसबाहेक, राम्रो माछा रोबोटहरू अल-कोओ, अम्बोगियो, फ्रान्सेली रोबोटिक्स, होंडा र सबो साथै स्टेगा र भेडा र साथै Worx बाट उपलब्ध छन्।
Wissenswertes को बारे मा घास काटन मिसिन
90 वर्षको बीचबाट, केहि बगैंचाहरूले आत्म-प्रोसेसर लन घास काटेर देखेका छन्, र कहिलेकाहीं मानिसहरूले यो बाक्लो टेक्नोलोजीको प्रशंसा गर्न बाड़मा रोकेका थिए। धेरै जना जनावरहरू खराब लागेनन्, जुन अचानक त्यहाँ थियो, जो बगैचाको विवाद गर्न चाहन्थे।
पहिलो "वास्तविक" माछा रोबोट रोबोट ओटोवर जीएक्सएनमक्स इलेक्ट्रोक्स र हज्क्वार्नबाट छ। किनभने त्यो पहिलो थियो कि आफैले फिर्ता लिन लडे जब उनको रिचार्ज भयो। यो एक नवीनता थियो जुन पहिलो मानवको बिना एक्लै लान एक्लै मार्न को लागी, यदि एक रखरखाव र कमीशन को नजरअंदाज गर्न को लागी।
धेरै निर्माताहरू इजाजतपत्र प्रमाणीकरणको साथ आफ्नो स्वामित्व विकासको सन्तुष्ट छन्। विशेष गरी हज्क्वार्न ओटोमोवर र फ्रिक्वेन्सी रोबिबोट रोबिमर धेरै अन्य कम्पनीका बीचमा छन्।
रोबोट वा पेट्रोल लॉन घास काटने
बाहेक रोबोटको मोजा सुविधा धेरैले आफैलाई सोध्छन् कि राम्रो तरिकाले कार्य गरिरहेको पेट्रोल लनमोवरको रोबोटको अन्य फाईदा वा हानि हो।
खरिद लागत स्पष्ट रूपमा पेट्रोल लॉनमोवरको लागि बोल्छ, किनभने यो राम्रो चिसो रोबोटको एक अंश खर्च गर्छ।
रोबोटको लागि राम्रो मछाडि परिणाम र यन्त्रको लागि सानो स्पेस आवश्यकता बोल्दछ। बेशक, कि कुनै घाँस काट्न को लागी हटाउनु पर्छ।
तर वातावरण र दक्षता के हो? पारिस्थितिक रूपमा, रोबोटको नाक अगाडी छ। किनकी पेट्रोल लॉनमोवर निकास ग्याँसहरू उत्सर्जन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन वातावरणको लागि राम्रो हुँदैन। रोबोटले रोशनीलाई काम गर्दछ र यसैले सफा गर्दछ। तिनीहरूलाई कुशल र सज्जन मानिन्छ।
को रखरखाव Rasenmähroboters
रखरखाव को बारे मा एक पारंपरिक लॉनम्वरको रूपमा खेती गर्न आवश्यक छ, जो कि बगैचाको मालिकलाई थाहा छ। तर रखरखाव गर्ने महंगा रोबोटलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन।
हप्तामा एक पटक, रोबोट सफा गर्नु पर्छ र चक्कुहरू जाँच गरियो। जब तिनीहरू सुस्त हुन्छन् भने यी स्थानहरू बदलिनु पर्दछ, जुन ढक्कन परिणाममा अपेक्षाकृत छिटो देखिन्छ।
ब्याट्री रोबोटको भाग हो, जुन लुगाको विषय हो। यो सामान्यतया धेरै वर्षहरूमा हुनेछ, तर सर्दीमा ठीलो हुदैन निर्माताको निर्देशन अनुसार। तहर बगैचा बगैचा भन्दा राम्रो मा कुनै पनि अवस्थामा छ, किनकि धेरै लामो समयको लागि धेरै मिनिस डिग्री एक ब्याट्री बनाउँछ।
त्यसो कि लान सुन्दर हुन्छ ...
यो ज्ञात छ कि घास केवल तपाईंको सामने अगाडि बढ्छ र सुन्दर देखिन्छ। जबसम्म घाँस विशेष रूपमा एक जनावर फिडको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, यसले फरक पार्दैन कि यो समानता कसरी भयो। तर आज, जहाँ घाँसको टुक्रा विशेषतया आभूषणमा पर्दछ, घाँस मोटो र समान हुन्छ, जबकि अझै छोटो र खेती गरिन्छ।
रोबोटको पछाडी निश्चित रूपमा यो थपिन्छ, किनकी यसको नियमित कटौतीले राम्रो बनाउँछ र सभ्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्दछ। यद्यपि, अधिकांश लन पोषक तत्वहरूको कमीबाट पीडित हुन्छन्। यो नाइट्रोजन, फास्फोरस र पोटेशियम हो। विशेष लन लामो समयको उर्वरकले यो सुधार्छ कि लान राम्रो देखिन्छ र घनत्वमा छिटो बढ्छ।
der कम लान कट, जो एक मछाने रोबोट संग mowing मिसिन संग प्राप्त गरिन्छ, एक साथ बुलाया छ मल उल्लेख। किनकि यो लानमा बायाँ छ भने, घास क्षेत्र राम्रो छ र यसले पोषक तत्वहरूलाई अवशोषित गर्न सक्छ, तथ्याङ्कबाट हटाउन को लागी निषेध गर्न सकिदैन।
यदि तपाइँ यस्तो रोबोट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो लानमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले बिर्सनु हुँदैन कि तपाई लामो समय सम्मको सूखेको कारणमा पकाउनु पर्छ। जबकि फूल र अन्य पौधहरु प्राय: प्रायः गरिन्छ, लाश अक्सर बिर्सन्छ।
एयर एक्सचेंज र उपहार को सुविधा को लागी पानी र उर्वरक वर्षमा एक पटक ठाडो रूपमा हुनुपर्छ। यो छ किनकि लान महसुस र मास हटाइयो र लान फेरि सार्न सक्छ। यो कदम विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईं रोबोट रोबोट प्रयोग गर्नुहुन्छ, किनकि यसले लनमा सानो घाँसको सुझाव "ड्रप" गर्नेछ जहाँ तिनीहरू प्रायः उर्वरक हुन्छन्। यद्यपि, अपरिहार्य मौसमको अवस्थामा, एक निश्चित महसुस पनि आवश्यक छ, जुन हटाइनेछ।
यी प्रश्नहरू प्राय: छलफल गरिन्छ घास काटन मिसिन मा
जब सार्थक हुन्छ घास काटन मिसिन?
वास्तवमा, जब क्यान्सर फिसाउन कठिन छ वा समय पर्याप्त छैन। विशेष गरी एलर्जी पीडाहरूको लागि यो एक वास्तविक राहत हो।
घास काटने को तरीका कसरि ड्राइव गर्न को लागी छ र कहाँ नहीं?
सामान्यतया, एक सीमित केबल राखिएको छ। यो स्थितिमा अनुकूल छ र रोबोट सर्कलहरू झाडी र बेड सुनिश्चित गर्दछ। उनी वृक्ष वा भान्साहरूमा बगाउँदा बगैंचामा बोल्छन्।
वर्षामा के गर्नु हुन्छ?
अहिले रोबोटहरू बारिश सेन्सरसँग मिल्दै छन्। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले चार्जिङ स्टेशनमा अधिक लिन्छन्, र यसले "इलेक्ट्रोनिक भेडा" लाई छोड्दैन, वा त्यहाँ फर्काउँछ जब पहिलो ड्रप छोड्छ। यदि घास काटने जस्तै त्यस्तो वर्षा सेन्सर छैन भने, यसलाई यसको सुरक्षा गर्न यसको लागि सतहबाट लैजान योग्य छ। तर सिद्धान्तमा, घास काटेर पनि वर्षामा काम गर्न सक्छ।
घाँस काट्नको लागी कसरी यो थाहा पाउन सक्छ?
Mowers एक निश्चित आकस्मिक सिद्धान्त अनुसार चलाउँछ। तिनीहरू निश्चित छन् कि तिनीहरूले सम्पूर्ण क्षेत्र समाप्त गरेको छ। जस्तै नै घाँस काट्न बन्द हुनु पर्छ, उदाहरणका लागि, रूख बाटोमा उभिएको छ, यो बन्द हुन्छ र केहि र साथ जान्छ।
मलाई कसरी थाहा छ मेरो बलियो घास काटन मिसिन हुनु पर्छ?
निर्माताहरू यन्त्रहरूमा संकेत गर्छन्, जसको लागि लान क्षेत्र उपयुक्त छ। अधिकतर 500 वर्ग मीटर भित्र, 500 र 1.000 वर्ग मीटर र माथिको बीचमा फरक छ। यदि कसैले यी कथनहरू बुझ्दछ भने, हामी घाँस काट्न, सम्पूर्ण क्षेत्र ड्राइभ गर्न बनाउँछौँ।
म बगैचामा ढोका संग के गर्छु?
यदि यो 35% उच्च भन्दा बढी होइन भने, सामान्यतया सामान्यतया यसले रोबोटलाई प्रत्येक रोचक बनाउँछ। यदि यो steeper हो, तथापि, यो यो डीलर मा संकेत र एक विशेष उपकरण खरीद गर्नुपर्छ।
म सीमा केबल कसरी सारियो?
यसैले घास काटेर कंक्रीट, काठ वा प्लास्टिक खरिद गर्दैन, एक निश्चित दूरी हटाउनुहोस् र सीमित केबल त्यहाँ राख्नुहोस्। सामान्यतः, सीमित तार र आवश्यक उपकरण घास काटने को दायरा मा शामिल छ।
ट्रिक: यदि तपाईँले किने किनारहरू यति टाढा राख्नुहुन्छ कि घास काटने को किनारा किनारा समाप्त हुन्छ, रोबोट अन्तमा क्यान्सर गर्न सक्छ र त्यहाँ कुनै किनाराहरू पुन: मर्न सकिँदैन।
मर्न केबल्स घाँस मा रुकाउन सकिन्छ वा तल पनि। गहिरो 10 सेमी सम्म हुन सक्छ, यहाँ तपाईलाई म्यानुअल मा हेर्नु पर्छ। त्यसपछि तार दृश्यात्मक छैन र ट्रिपिंग पनि छैन। तथापि, कसैले यसलाई ठीक गर्न सकेन भने, बिस्तरमा केहि परिवर्तनहरू, बिना फर्काउन सक्नुहुनेछ।
यस्तो उपकरणको भोल्युम के हो?
सामान्य अवस्थामा, घास काटनेवाला वैक्यूम क्लीनर भन्दा ठूलो हुनु हुँदैन र यसैले नचाहिने मालिक वा छिमेकीलाई सतावट गर्दछ। यो एक पारंपरिक लङ्ग घास काटने वाला तुलना गर्न सकिँदैन।
सबै मा, रोने रोबोट एक राम्रो चीज हो जब तपाईंसँग ठूलो लन छ। तर तपाईलाई बिर्सनु पर्दैन र त्यसको पछि लाग्न बिर्सनु हुँदैन।
दर्जा: 4.0/ 5।3चुनावबाट।
अर्को लेखबच्चाहरु Caddies